IGitHub Copilot, umsizi wezobuciko bokufakelwa wokubhala ikhodi | Kusuka kuLinux
IGitHub Copilot, umsizi wezobunhloli bokufakelwa wokubhala ikhodi
IGitHub yethuliwe ezinsukwini ezimbalwa ezedlule umsebenzi omusha obizwa ngokuthi «IGitHub Copilot»Okufanele kwenze impilo ibe lula kohlelo futhi njengoba negama lalo msebenzi liphakamisa, liphethe ukubukeza ikhodi nawe, okungukuthi, linikeza iwizadi ehlakaniphile ekwazi ukwakha ukwakha okujwayelekile lapho kubhalwa ikhodi.
Uhlelo yasungulwa ngokubambisana nephrojekthi ye-OpenAI futhi isebenzisa ipulatifomu yokufunda imishini ye-OpenAI Codex, baqeqeshwe kumakhodi emithombo ehlukahlukene ebanjwe ezindaweni zokugcina zomphakathi zeGitHub.
Namuhla, sikhipha ukubuka kuqala kobuchwepheshe kwe- IGitHub Copilot , i-AI pair programmer entsha esikusiza ukuthi ubhale ikhodi engcono. IGitHub Copilot ikhipha umongo kusuka kukhodi osebenza kuyo, iphakamisa imigqa ephelele noma imisebenzi ephelele.
IGitHub Copilot yehlukile ezinhlelweni zokuqedwa kwamakhodi ngokwesiko ngenxa yekhono lokwakha amabhulokhi wekhodi anzima kakhulu, kuze kube yimisebenzi ekulungele ukusetshenziswa ehlanganisiwe kucatshangelwa umongo wamanje. Njengoba ICopilot umsebenzi we-AI ofunde ngemigqa eyizigidi eziningana zekhodi futhi kuyabona ukuthi uhlelani ngokususelwa encazelweni yomsebenzi, njll.
Isibonelo, uma ufuna ukwenza umsebenzi owenziwa ama-tweets, iCopilot izowubona futhi iphakamise ikhodi yawo wonke umsebenzi, ngoba ngokuqinisekile bebekhona abahleli abenele ngaphambi kwalokho asebewubhalile umsebenzi onjalo. Lokhu kuyasiza ngoba kukusindisa enkingeni yokufuna izibonelo kwamanye amazwibela ekhodi.
Kukusiza ukuthola ngokushesha ezinye izindlela zokuxazulula izinkinga, ukubhala izivivinyo, nokuhlola ama-API amasha ngaphandle kokwenza ucwaningo lwe-Inthanethi ukuthola izimpendulo. Njengoba ubhala, ivumelana nendlela obhala ngayo ikhodi, ukukusiza uqedele umsebenzi wakho ngokushesha.
Esinye isibonelo, ukuthi uma kunesibonelo sesakhiwo seJSON kumazwana, lapho uqala ukubhala umsebenzi wokuhlaziya lesi sakhiwo, iGitHub Copilot izonikeza ikhodi engaphandle kwebhokisi, futhi lapho umsebenzisi ebhala ephinda izinqubo ezijwayelekile zencazelo , izokwakha izikhundla ezisele.
Ngalokhu singaqonda ukuthi iGitHub Copilot ivumelana nendlela umqambi abhala ngayo ikhodi futhi acabangele ama-API nezinhlaka ezisetshenziswe kuhlelo.
Ngokusho kweGitHub, "inamandla amakhulu ngokwengeziwe kunokukhiqiza i-GPT-3 ekwenzeni ikhodi." Ngoba iqeqeshwe kudathasethi efaka ikhodi yomthombo eyengeziwe yomphakathi, i-OpenAI Codex kufanele ijwayelane kakhulu nokuthi onjiniyela babhala kanjani ikhodi futhi bakwazi ukuletha ukwakheka okunembe kakhulu.
I-OpenAI Codex inolwazi olunzulu lokuthi abantu bayisebenzisa kanjani ikhodi futhi inamandla amakhulu kune-GPT-3 ekukhiqizweni kwekhodi, ngokwengxenye ngoba yaqeqeshwa kusethi yedatha efaka inani eliphakeme kakhulu lekhodi yomthombo womphakathi.
Ngokuzayo, kuhlelwe ukuthi kwandiswe inani lezilimi nezinhlelo ezithuthukiswayo. Umsebenzi we-plugin wenziwa ngokubiza insizakalo yangaphandle esebenza ohlangothini lweGitHub, lapho, phakathi kwezinye izinto, okuqukethwe kwefayela elihlelwe ngekhodi kudluliswa.
Ekugcineni, kufanelekile ukuthi sisho ukuthi umqondo wento ethile engukuqedwa kwamakhodi ngokuzenzakalela ngokususelwa ekuhlakanipheni okufakelwayo akuyona into entsha ngokuphelele, ngoba ngokwesibonelo iCodota neTabnine bekunikela ngento efanayo isikhathi eside, ngaphezu kokuhlanganisa imisebenzi yabo nokugcina ngenyanga bavumelana ngeTabnine njengophawu oluyinhloko.
Singasho futhi IMicrosoft esanda kwethula isici esisha, i-Power Apps, esebenzisa imodeli yolimi ye-OpenTI GPT-3 ukusiza abasebenzisi ukuthi bakhethe amafomula afanele.
Uma unesifiso sokwazi okwengeziwe ngakho, ungabheka ifayela le- imininingwane kusixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » IGitHub Copilot, umsizi wezobunhloli bokufakelwa wokubhala ikhodi
I-WhyNotWin11: Uhlelo lokusebenza ukuqinisekisa ukuthi i-PC yethu ilungele iWindows 11